सरकारको कोषमा प्रतिपक्षको ५० लाख
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम
सरकारलाई नेपाली कांग्रेसको साथ
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस (कोभिड —१९) विरुद्धको लडाईमा सरकारसँगै रहेको जनाएको छ । कांग्रेसले कोभिड—१९ विरुद्धको सरकारले अघि सारेका रणनीतिहरुको पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै यो
निर्वाचनको ४ वर्षपछि कांग्रेसले पायो पदाधिकारी र विभाग
बागलुङ । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति बागलुङले निर्वाचन भएको चार वर्षपछि पूर्णता पाएको छ । कांग्रेस बागलुङका सभापति दीपेन्द्रबहादुर थापाले निर्वाचित भएको चार वर्षपछि पदाधिकारी र विभाग गठन गर्नुभएको हो
शेर्माकाे शाेकमा पार्टीकाे झण्डा आधा झुकाइने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले तीन दिन पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा शु्क्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले पूर्णकुमार शेर्मा (लिम्बु)को निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त
किचलोमै रुमलिएको कांग्रेस (भिडियोसहित)
काठमाडौं । एउटा उखान छ– तैं रानी मैं रानी, कसले भर्ने ? पानी । नेपाली कांग्रेसमा अहिले यस्तै भएकाे छ । कार्यकर्ताले पार्टी कसरी र कहिले बलियाे हाेला ? भन्ने
कांग्रेसमा फेरि किचलो, पौडेल पक्षले कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसमा फेरि विवाद शुरु भएको छ । संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट पक्षसँग गरेको सहमति उल्लघंन गरेपछि विवाद पुन व्युउँतिएको हो । सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ
कांग्रेसमा थप ७ विभाग गठन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा थप ७ विभाग गठन भएको छ । कांग्रेस विधानमा महाधिवेशन भएको २ वर्ष भित्र सबै विभागलाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीको कार्यकाल
कांग्रेसमा विभाग गठनपछि फेरि किचलो
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसमा विभाग गठनपछि फेरि किचलो शुरू भएको छ । कन्द्रीय पदाधिकारीकाे कार्यकाल सकिन २ दिन अघि सभापति शेरबहादुर देउवाले एकपक्षीय रुपमा विभाग गठन गरेसँगै